माइक्रोसफ्ट ब्यान्ड2समिक्षा: सबैभन्दा शक्तिशाली - समाचार नियम
यो माइक्रोसफ्ट ब्यान्ड2छैन भन्दा आकर्षक छ, सस्ता वा सबैभन्दा लामो-स्थायी फिटनेस ट्रयाकर उपलब्ध. तर यो सेन्सर र अन्तरदृष्टि भरिएको छ, र साथ बाँच्न सजिलो पूर्ण विशेष trackers को छ.
सेन्सर भरिएको, आफ्नो निद्राबाट मा रोचक अंतर्दृष्टि प्रदान गर्दा मिठास नभइकन लगाउन सहज, व्यायाम र स्वास्थ्य
शीर्षक यो लेख “माइक्रोसफ्ट ब्यान्ड2समीक्षा: सबै भन्दा शक्तिशाली र उपयोगी फिटनेस trackers को एक” शमूएल गिब्स द्वारा लेखिएको थियो, लागि शुक्रवार 22 जनवरी theguardian.com 2016 07.00 UTC
एक फिटनेस ट्रयाकर बनाउन माइक्रोसफ्ट दोस्रो प्रयास धेरै सहज र यसको पहिलो भन्दा आकर्षक छ, सेन्सर र साथ बाँच्न अपेक्षाकृत सजिलो भरिएको.
यो पहिलो माइक्रोसफ्ट ब्यान्ड एक Chunky थियो, clunky उपकरण, र गर्दा, केही तरिकामा, यो कि कलाई गर्न तंग लगाउँथे गर्न आवश्यक उपकरणहरू भन्दा अधिक आरामदायक थियो, यो बारेमा आपराधिक टखने ट्रयाकर को एक सानो whiff भन्दा बढी थियो.
बैंड एक बाङ्गो प्रदर्शन छ, लचिलो रबर पक्ष र एक कठिन गांठ को सेन्सर लागि ब्याट्री र इलेक्ट्रोड को clasp खेल्छ र समावेश गर्ने. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
यो माइक्रोसफ्ट ब्यान्ड2ditches को प्लास्टिक स्क्रिन एक गोरिल्ला ग्लास प्रदर्शन र एक धातु शरीर को लागि. यो राम्रो देखिन्छ, स्पष्ट र उज्ज्वल AMOLED प्रदर्शन संग पढ्न सजिलो छ, र smashed वा यो सबै समय प्रयोग गरेर दुई महिनामा scratched छ. बैंड बाँकी एक धातु clasp र एक प्लास्टिक बाक्लो टुक्रा यसमा दुई धातु सम्पर्क संग एक कठिन तर लचिलो काला रबर बनेको छ.
यो बाक्लो टुक्रा ब्याट्री छ, र धातु सम्पर्क छाला सेन्सर केही लागि हो. यो clasp एक स्लाइड छ, पुस-बटन जारी, जो उत्कृष्ट छ. तपाईं र बन्द ले र यसलाई सजिलै फ्लाई मा समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ - तपाईं ट्रयाक हरेक दिन को लागि एक सान्त्वना फिट र यसलाई आफ्नो नारी मा वरिपरि चलिरहेका रोक्न तंग फिट बीच स्विच गर्दा धेरै उपयोगी गर्दा रन लागि जाँदै.
बैंड को माथि र तल को ब्यान्ड को पक्ष तंग हुन बिना को कलाई मा ठाउँमा यसलाई पकड, यो अर्थ केही प्रतियोगिहरु भन्दा धेरै कम मिठास छ. एक शर्ट कफ मा दल्नु देखि लगाउने स्पष्ट देखिने दुई महिना पछि थियो, तथापि. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
यो एक शर्ट कफ अन्तर्गत फिट, छैन मिठास छ र आफ्नो नारी मा तंग महसुस गर्न छैन. यो मा संग टाइप गर्न सजिलो पनि छ, आफ्नो नारी छेउमा वरिपरि ब्यान्ड पातलो छ रूपमा, तर रबर मा समाप्त महिना मात्र एक जोडी पछि पहनने को स्पष्ट संकेत देखाउँछ.
यो ब्यान्ड2छैन पनरोक छ, तर पसिना-प्रमाण छ. यसमा कुनै showering, वा पौडी, तर यो मुद्दा बिना कसरत बच्नेछन्.
देखाउनु: 12.8मिमी x 32mm AMOLED (320×128 पिक्सेल)
जडान: ब्लूटूथ 4.0
मिल्दोजुल्दो: एन्ड्रोइड 4.3+, 4S वा पछि आईफोन, विन्डोज फोन 8.1 वा पछि
सेन्सर: अप्टिकल मुटुको दर, 3-अक्ष गति, gyrometer, जीपीएस, परिवेश प्रकाश, यूवी, छाला तापमान, capacitive सेन्सर, galvanic छाला प्रतिक्रिया, म्यारोमीटर
ओप्टिकल मुटुको दर सेन्सर प्रदर्शन अन्तर्गत कलाई मा बस्छन, को पहनने गरेको छाला संग एक ठोस सम्पर्क बनाउन. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
यो ब्यान्ड2सबैभन्दा उन्नत प्रौद्योगिकी फिटनेस संग स्थान्तरण को छ 10 विभिन्न सेन्सर र एक माइक्रोफोन. यो सेन्सर केही प्रत्यक्ष पढ्ने-बहिष्कार दिन, यस्तो लगातार अप्टिकल हृदय-दर सेन्सर रूपमा (जो म परीक्षण गर्नुभएको सबैभन्दा सही मध्ये एक छ), यूवी सेन्सर र जीपीएस. अरूलाई कदम र गतिविधि पत्ता लगाउन संयोजन मा प्रयोग गरिन्छ, ट्रयाक कसरत र अन्य कुराहरू.
को संग रूपमा मूल माइक्रोसफ्ट ब्यान्ड, यो सेन्सर केही प्रयोग गर्न देखा छैन, वा कम से कम डाटा अझै प्रयोगकर्ता सुलभ छ.
जानकारी को सबैभन्दा ब्यान्ड नै मा हेर्न सकिन्छ, वा अनुप्रयोग र वेब अनुप्रयोग मार्फत, जो म कुनै पनि फिटनेस ट्रयाकर प्रयोग गरिएको छ सबै भन्दा राम्रो को छ.
यो ब्यान्ड2पनि सो ट्रैक र सबै भन्दा राम्रो क्षण मा तपाईं उठ्नु एक कम्पन अलार्म छ. रेकर्ड डाटा म परीक्षण गरेको छ भन्दा कुनै पनि सो ट्रयाकर को रोचक केही छ. यो पनि मानक प्रकाश देखाउँछ, रात मार्फत गहिरो र आराम दिने सो चिह्नों. तर म पनि जब म ओछ्यानमा अघि बियर वा रक्सीको गिलास पिउन मेरो हृदय यसको घरबार पुग्न गर्दैन हेर्न सक्नुहुन्छ 49 प्रति मिनेट रक्सी पछि सम्म बीट्स रात को बीचमा मेरो प्रणालीबाट खाली गरिएको छ.
सो ट्रयाकिङ विशेष रोचक छ, बस कसरी लामो वा गहिरो तपाईं कसरी सुत्थ्यौं परे अंतर्दृष्टि प्रदान. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
म सुतेको छु, तर रक्सी मेरो विश्राममा ढिलाइ भएको छ, जो रक्सीको पनि सानो रकम किन बिहान मलाई थप थकित बनाउन बताउँछन्.
माइक्रोसफ्ट स्वास्थ्य डाटा को मेरो समझ गर्न फरक संसार बनाउन जानकारी को यी साना टुक्रा भरिएको छ, र यो प्रत्येक अद्यावधिक संग सुधार छ. अन्य मञ्चहरूमा मासिक शुल्क तिर्न बिना एकदम नै inferences वा विवरण प्रस्ताव छैन.
सबै भन्दा राम्रो नयाँ सुविधाहरू एक कस्टम कसरत निर्माण र ब्यान्ड अपलोड गर्ने क्षमता छ, जो त्यसपछि आफ्नो प्रगति ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ, या त पूरा प्रतिनिधि वा समय मार्फत.
अनुकूलन कसरत बैंड गरेको बलियो बिन्दुको एउटा हो, तपाईंलाई मार्गदर्शक र प्रतिनिधि वा समय नाप्ने. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
यो छिटो र के गर्न सजिलो छ. म करिब पाँच मिनेटमा एक 10-चरण सर्किट-प्रशिक्षण सत्र निर्माण, मेरो ब्यान्ड यसलाई अपलोड र टाढा म गए. तपाईं गरिरहनुभएको के तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने धेरै पूर्व-प्रोग्राम अभ्यास र दिनचर्या छन्, धेरै राम्रो व्याख्यात्मक भिडियो संग पूरा, छनौट गर्न.
चालु ट्रयाकिङ पनि उत्कृष्ट छ, प्राप्त र जीपीएस संग एक स्थान तय कायम, हुनत यो एकदम रूपमा हृदय-दर ब्यान्ड प्रशिक्षण लागि समर्पित चलिरहेको हेर्ने रूपमा प्रभावकारी छ.
माईक्रोसफ्टका 'टायल' बैंड मा कामहरू कि सानो अनुप्रयोगहरू छन्, स्मार्टफोन सूचनाहरू प्रदान गर्न सो ट्रयाक बाट. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
ठोस फिटनेस-ट्रयाक सुविधा सेट परे, बैंड2एक छद्म-smartwatch जस्तै व्यवहार. यो स्मार्टफोन सूचनाहरू देखाउन सक्छौं, कल सहित, एउटा बटन डबल ट्याप मा संगीत नियन्त्रण छ, र को लागि ट्विटर टाइल्स छ, फेसबुक, दूत, स्टक, मौसम र Starbucks, जो तपाईं एक बारकोड संग कफी लागि भुक्तानी गर्न अनुमति दिन्छ.
विन्डोज फोन प्रयोगकर्ता जोडिएको जानकारी पुल सम्म र आवाज नियन्त्रण प्रदर्शन माईक्रोसफ्टका भर्चुअल सहायक Cortana पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ. अन्य सुविधाहरू अधिकांश, एन्ड्रोइड र आइओएस सहित संगीत प्लेब्याक नियन्त्रण काम पनि.
चार्जर magnetically को पट्टा को अन्त गर्न संलग्न र एक USB शक्ति एडप्टर मा प्लग. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
यो माइक्रोसफ्ट ब्यान्ड2लामो बस दुई भन्दा बढी दिन मेरो परीक्षणमा चार्ज. ब्याट्री जीवन कम एक रन लागि जीपीएस प्रयोग, रूपमा ब्यान्ड पठाइएको सूचनाहरू सबै समय मा स्क्रिनमा एउटा हेर्ने रूपमा प्रयोग गरेर वा भएको गर्छ. म बारेमा लागि यो चार्ज पाइयो 20 एक दिन मिनेट - 10 मिनेट showering गर्दा र 10 ओछ्यानमा अघि मेरो दाँत लिंदा गर्दा मिनेट - यो बीच राख्न पर्याप्त थियो 50 र 80% चार्ज.
यो पूर्णतया एक USB बस एक भन्दा बढी घण्टामा शुल्क, दृढ समझ संग पट्टा को अन्त मा चुम्बकीय चार्जर कि क्लिप.
यो माइक्रोसफ्ट ब्यान्ड2लागत तीन आकार मा £ 200, सानो, मध्यम र ठूलो, तर एक रंग. तुलना लागि, को Fitbit ज्वार लागत समान विशेषताहरु संग £ 200.
यो ब्यान्ड2को कलाई को भित्र वा बाहिर पहना गर्न सकिन्छ, यहाँ हृदय दर देखाउन. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
यो माइक्रोसफ्ट ब्यान्ड2छैन भन्दा आकर्षक छ, सस्ता वा सबैभन्दा लामो-स्थायी फिटनेस ट्रयाकर उपलब्ध. तर यो सेन्सर र अन्तरदृष्टि भरिएको छ, र साथ बाँच्न सजिलो पूर्ण विशेष trackers को छ. यो एन्ड्रोइड संग क्रस-अनुकूलता छ, आइओएस र विन्डोज प्रशंसा छ, जस्तो Microsoft स्वास्थ्य अनुप्रयोगको अनुप्रयोग र डाटा दृश्य हो.
यो एक राम्रो बनाउँछ, उन्नत ब्यान्ड साथै लगाउँथे गर्न एक लाटा हेर्ने रूपमा, एक शर्ट कफ अन्तर्गत फिट, तर एक बाहिर-र-बाहिर smartwatch रूपमा कम उपयोगी छ. यो छौँ पछिल्लो कसरी लामो वरिपरि प्रश्न चिह्न पनि छन्, पहिलो दुई महिनामा पहनने को visibly देखाइएको संकेत भएको.
पेशेवरों: सेन्सर-खचाखच भरिएको, लगातार मुटुको दर, जीपीएस, मिठास छैन, बाहिर hairs पुल छैन, राम्रो डाटा दृश्य, क्रस-मंच, कुनै मासिक शुल्क, निद्रामा ठूलो ट्रयाकिङ, अनुकूलन व्यायाम regimes / ट्रयाकिङ, सूचनाहरू
नकारात्मक: पनरोक छैन, एकदम Chunky, रबर पहनने को संकेत देखाउँछ, ब्याट्री जीवन राम्रो हुन सक्छ
यो clasp काम साँच्चै राम्रो बस स्लट साथ यो स्लाइड सजिलो अन-द-फ्लाई समायोजन अनुमति. यो clasp पनि यो एउटा यूवी सेन्सर छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
माइक्रोसफ्ट ब्यान्ड समीक्षा: सेन्सर-खचाखच भरिएको - एक offender जस्तै देख तपाईं आपत्ति छैन भने
Fitbit ज्वार समीक्षा: एक फिटनेस ट्रयाकिङ हेर्ने भन्ने एकदम सुपर छैन
एन्ड्रोइड, लेख, फिटनेस, ग्याजेटहरू, IOS र, जीवन र शैली, माइक्रोसफ्ट, समीक्षा, शमूएल गिब्स, प्रविधि, पहिरनयोग्य प्रविधि, विन्डोज फोन
← 15 हास्यास्पद कुराहरु Google मा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ त्यो huawei मेट 8 समिक्षा →